Moov Madagascar (www.moov.mg)
Fikasana fitsaram-bahoaka : nateriny ny fokonolona teo amin地y birao ny zandary ny razana
20-03-2017 / 11:04
Saika nivadika ho fitsaram-bahoaka ihany koa ny hatezeran地y fokonolona tany Mananara Avaratra ny farany herinandro lasa teo.
Sahala tamin地y zava-niseho tany Ambanja, fitakiana ny hamoahana olona tao amin地y borigady ny zandary tao Mananara Avaratra no saika nivadika fitsaram-bahoaka. Ny hamoahan地y mpitandro ny filaminana ilay nahavanon-doza ka nahafaty raim-pianakavina no nandrasany ny fokonolona. Ny farany herin誕ndro teo, tany Mananara Avaratra indray ity raharaha ity, saika nipoaka hatezeran地y vahoaka. Nohididin地y fokonolona ny borigadin地y zandary. Efa nisy nampandre ny zandary tao an-toerana ka tsy nitazona ela ilay nahavanon-doza fa nalefan段zy ireo tany maroantsetra.
Malahelo ny tamin地y zava niseho fa indrindra ny fomba namonoana ilay lehilahy ny fokonolona ka nateriny izy ireo manoloana ny borigady ny zandary ao Mananara avaratra ny razana, raha ny fanazavana dia fihetsika natao ampisehoana ny tsy fankatoavana sy ny tsy rariny tamin地y fomba namonoana ny mpiara belona azy ireo no antony.
Tsy misy hitokisana
Tsy mitsaha-mitombo ary saika any amin地y faritra rehetra manerana an段 Madagasikara dia ahitana fitsaram-bahoaka avokoa. Antony, tsy mahatoky intsony ny rafitra natao hiaro azy ny malagasy, isan段zany ny rafi-pitsarana sy ny mpitandron地y filaminana, izy ireny natao hiaro indray ankehitriny no atao heri-pamoretana sy ampihorohoroana ny mponina raha ny zava niseho tany antsakabary no jerena herinandro vitsy lasa izay. Ny asabotsy lasa teo, nisy ny valan-dresaka niarahana tamin地y mpisehatra maro nandinihana ny fitsaram-bahoaka, nivoitra tamin段zany araky ny nambaran段 Imbiky Anaclet fa tokony hiverina ny dinam-pokonolona ahafahana mampihena ny fitsaram-bahoaka.